बिमा(Insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
गलत नीतिले पुँजीबजार भेन्टिलेटरमा पुग्यो : तुलसीराम ढकाल
नेपालको ब्रोकर कमिसन साउथ एसियामै सबैभन्दा कम : सन्तोष मैनाली
अजोड इन्स्योरेन्स र ज्यापु समाज यलबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ज्यापु समाज यलबीच बीमा जागरण र शिक्षा सञ्चालन गर्ने समझदारी बनेको छ। समझदारीपत्रमा अजोडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्री र ज्यापु समाज यलका अध्यक्ष तीर्थलाल महर्जनले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो समझदारीसँगै अजोडले ज्यापु समाज यल र त्यस संस्थासँग आबद्ध उद्योगीव्यवसायी सदस्यहरुको...
‘सूर्या र ज्योति लाइफबीच मर्जर जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो, अन्य कुरा टुंगो लागेको छैन’
काठमाण्डौ। सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जर सम्झौताका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका खबरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। दुवै कम्पनीले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मर्जर सम्झौता विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका खबरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। ‘सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स...
प्रभु इन्स्योरेन्सद्वारा विशेष साधारणसभा आह्वान, मर्जरमा जाने मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले विशेष साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले विशेष साधारणसभा यही असार २८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय (प्रभु कम्प्लेक्स) मा बहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले भविष्यमा कुनै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग...
काठमाण्डौ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ। काठमाण्डौको होटेल याक एन्ड यतीमा एक कार्यक्रमबीच सूर्या र ज्योति लाइफले आपसमा मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौतापत्रमा दुवै कम्पनीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन्। यी दुवै कम्पनीबीच १ः१ सेयर स्वाप...
काठमाण्डौ । स्थापनाकालदेखि निरन्तर बजार हिस्सा बढाउँदै आएको आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आईएमई बालकिरण जीवन बीमा योजना बीमितहरुमाझ लोकप्रिय हुँदै आएको र पछिल्लो समयमा उल्लेख्य संख्यामा बिक्री हुने बीमालेख भएको सार्वजनिक गरेको छ। बच्चाको जन्मलगत्तै लिन सकिने यो बीमा योजनामा बालबालिका तथा अभिभावक दुवैको पूर्ण अवधिका...
एमडीआरटी वार्षिक मिटिङका लागि रिलायन्स लाइफका दुई अभिकर्ता अमेरिका प्रस्थान
काठमाण्डौ । मिलिनियम डलर राउन्ड टेबल २०२२ को वार्षिक सभामा भाग लिन रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका लिडर रिलायन्स साथीहरु नमीता न्यौपाने एवं कमल दाहाल अमेरिकाको बोस्टनतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। यसपटकको एमडीआरटी कार्यक्रममा अमेरिका जान लागेका नेपालका ३ जना अभिकर्तामध्ये २ जना अभिकर्ता रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको रहेको कम्पनीले...
बीमा समितिद्वारा हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई मर्जरमा अन्तिम स्वीकृति प्रदान
काठमाण्डौ । बीमा समितिले हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई मर्जरमा जान अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलका अनुसार हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्टलाई मर्जरमा जान अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। यी दुवै बीमा कम्पनीले मर्जर प्रक्रिया टुंग्याएर साउनबाट एकीकृत कारोबार सुरु...
सेयरबापतको थप ५०% रकम जम्मा गर्न सेयरधनीलाई महालक्ष्मी लाइफको आग्रह
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सेयरबापतको थप ५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न संस्थापक सेयरधनीहरुलाई आग्रह गरेको छ। कम्पनीले आज एक सूचना जारी गर्दै सेयरबापतको थप ५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ। कम्पनीको गत वैशाख २५ गते सम्पन्न विशेष साधारणसभाको निर्णयाअनुसार अधिकृत, चुक्ता र जारी पुँजी भएबमोजिम कम्पनीको...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १७ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको आज अपराह्न बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही असार २९ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको डिल्लीबजारस्थित अमृतभोग क्याटरिङमा बिहान ११ बजेबाट हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित...
आमाद्वारा सानो–सानो रुपमा बचत गरी जम्मा भएको रकमबाट छोरी–ज्वाइँलाई बीमा कोशेली
काठमाण्डौ । आमा–बुवाका लागि आफ्ना सन्तान प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। सन्ततिको सुनौलो र उज्ज्वल भविष्यको चाहना सदैव आमा–बुवाले राखेका हुन्छन्। उनीहरुको पालनपोषन, शिक्षादीक्षा, विवाह, व्रतबन्ध आदि अविस्मरणीय रहोस भन्ने इच्छा सबै अभिभावकको हुन्छ। छोरा–छोरीको विवाह अभिभावकका लागि एक अमूल्य क्षण हुन्छ। यिनै क्षणलाई यादगार...
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले डाक्यो विशेष साधारणसभा, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले विशेष साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विशेष साधारणसभा यही असार २३ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको भाटभटेनीस्थित आम्रपाली बैंक्वेटमा बिहान ११ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले नियामक निकायले तोकेबमोजिम कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि...
रिलायन्स लाइफको ग्यारेन्टेड रिटर्नसहितको ‘मेरो सुनिश्चित प्रतिफल बीमा योजना’ सार्वजनिक
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ग्यारेन्टेड रिटर्न सहितको बीमालेख योजना ’मेरो सुनिश्चित प्रतिफल बीमा योजना’ आजबाट प्रचलनमा ल्याएको छ। आज आयोजित एक समारोहबीच सार्वजनिक गरिएको यो बीमा योजना आजकै दिनदेखि प्रचलनमा ल्याएको कम्पनीका प्रखुख कार्यकारी अधिकृत राकेश पोखरेलले बताए। यो बीमा योजनाअन्तर्गत बीमितले आफ्नो...
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा मृत्युदाबी भुक्तानीको रकम हस्तान्तरण
काठमाण्डौ । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कैलालीको धनगढीमा मृत्युदाबी भुक्तानी गरेको छ। कम्पनीले गत असार ३ गते बीमित विशाल परियारको मृत्युदाबी भुक्तानी गरेको हो। वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बीमा गरेका विशाल परियारको गत चैत १५ गते बिरामी भएर मृत्यु भएको थियो। बीमितले इच्छाएका व्यक्ति उनकी पत्नी सोनिका सुनारलाई...
महालक्ष्मी लाइफको ‘साइन्स अफ सेल्स’सम्बन्धी प्रशिक्षण
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले असार ४ गते काठमाण्डौमा ‘साइन्स अफ सेल्स’ सम्बन्धी एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बागमती प्रदेशअन्तर्गतका शाखा तथा उपशाखाका अभिकर्ताहरुलाई बिक्रीकलासम्बन्धी प्रशिक्षण दिने उद्देश्यले मित्रपार्कस्थित गोल्डेन लाईट पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको...
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पोखरामा किन्यो रु. १८ करोड बढीको लागतमा घरजग्गा
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पोखरामा १८ करोड रुपैयाँ बढीको लागतमा घरजग्गा किनेको छ। कम्पनीले व्यावसायिक एवं कार्यालय प्रयोजनका लागि पोखरा महानगरपालिका–८ न्युरोडमा १८ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँको लागतमा २ वटा घरसहितको २९९ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा किनेको हो। जसमा घरजग्गाको मूल्य १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ र...